အရမ်းမှန်တဲ့ လက်သန်း ဗေဒင် ကြည့်ရအောင် – Myanmar
အရမ်းမှန်တဲ့ လက်သန်း ဗေဒင် ကြည့်ရအောင်
September 10, 2020 admin Knowledge, Life Style 0
သင့်ရဲ့ လက်သန်းလေး တွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ( အမျိုးသား ဆို ဘယ်ဘက်၊ အမျိုးသမီး ဆို ညာဘက်။ ) လက်သန်းမှာ အပိုင်း သုံးပိုင်း ကန့်ထားပါတယ်။
(အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားသော ပုံ ကို ကြည့်၍ မိမိလက်နဲ့ တိုက်ဆိုင် ကြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ နံပတ် အလိုက် ဖတ်ရှုကြည့်ပါ…)
အဲ့ဒီ သုံးပိုင်း အရ အရှည်ဆုံး အပိုင်း ရဲ့ အားသာချက်တွေပါ။
1. လက်သန်း ထိပ်ဆုံးက အရှည်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ… ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်၊ဘာသာစကား ကြွယ်ဝတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖော်ပြတဲ့ အခါမှာ ကျွမ်းကျင်တယ်၊ လေ့လာ ခြင်း ကောင်းတာကြောင့် သူများတွေရဲ့ အရူးလုပ်ခြင်း မခံ၇ပါ။
2. လက်သန်း အလယ်ပိုင်းက တစ်ခြား အပိုင်းတွေထက် ရှည်နေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သူများ ကို စိတ်ရှည် လက်ရှည် နဲ့ ပြုစု စောင့်ရှောက်ဖို့ ပင်ကိုယ် ကောင်းပြီးသားပါ ။ ကျန်းမာရေး နယ်ပယ်မှာ လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ တော်တော် များများ ဒီလို လက်သန်းမျိုး ပိုင်ကြပါတယ်။
3. လက်သန်း အောက်ဆုံး အပိုင်းက ပိုပြီး ရှည်နေခဲ့မယ် ဆိုရင် သင်ဟာ လွတ်လပ်ခြင်းကို နှစ်သက်တယ်။ အပူအပင်မရှိတဲ့ ဘဝကို အေးအေး ဆေးဆေးနေချင်တယ်။ သင်ဟာ အချက်လက်လက် ကျကျ နဲ့ စကားကို ပြန်ပြောနိူင်စွမ်းရှိတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ အဲဒီ သုံးပိုင်း အရ အတိုဆုံး အပိုင်း ရဲ့ အားနည်း ချက်တွေပါ။
4. လက်သန်း အပေါ်ဆုံး အပိုင်းက အတိုဆုံး ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင် ဖော်ပြနိူင်မှု အားနည်းတယ်။ သင်ဟာ မွေးလာကတည်းက ရှက်တတ် တာကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် နားလည် ရန်ခက်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ဟာ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားမှာတော့ သိပ် ထင်ပေါ် ကျော်ကြားခြင်း မရှိပါဘူး။
5. လက်သန်း အလယ်ပိုင်းက အတိုဆုံး ဆိုရင် သင်ဟာ သစ္စာ ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သင့် စိတ်သဘောထား တွေက အမြဲတမ်း တူညီနေသလို သင့် ဟာ လိုက်လျော ညီထွေစွာ မပြောင်းလဲတတ် ပါဘူး။ ဒါဟာ အားသာချက် ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ဖက်မှာတော့ သင်ဟာ ခေါင်းမာတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဆိုတာ ဖော်ပြနေပါတယ်။
6. လက်သန်း အောက်ဆုံး အပိုင်းက အတိုဆုံး ဆိုရင် သင်ဟာ တစ်အား ရိုးစင်းပြီး သူများ အပေါ် ခဏလေး နဲ့ယုံတတ်ပါတယ်။ တစ်အား ရိုးတော့ တစ်ခါ တစ်လေ သူများ အပေါ် မယဉ်ကျေးတာမျိုး မသိနားမလည် တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အိမ်စာ မလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားကို ထိုင်ထ အကြိမ် ၁၀၀ လုပ်ခိုင်းရာမှ ကျောင်းသားသေဆုံး
ခရေပင်လမ်းခွဲ လူကူးတံတားပေါ်မှာ ပိုင်ရှင်မဲ့ အမျိုးသားတဦးသေဆုံးနေ